Xildhibaanada oo kulamo la leh madaxda Galmudug – Radio Daljir
Xildhibaanada oo kulamo la leh madaxda Galmudug
Seteembar 27, 2017 11:32 b 0
Wafdi xildhibaano oo katirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gaaray magalaada Cadaado ee xarunta maamulka Galmudug ayaa bilaabay wada hadalo lagu dhameynayo khilaafka soo kala dhexgalay hogaanka Galmudug.
Xildhibaanada oo uu hogaaminayo guddoomiye kuxigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abshir Bukhaari ayaa la kulmay madaxwaynaha Galmudug ee baarlamaanku uu xilka ka qaaday Axmed Ducaalle Geelle Xaaf, madaxwayne kuixgeenka Maxamed Xaashi Carabay iyo guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir.
Xildhibaanada ayaa ka codsaday masuuliyiinta inay dhameeyaan khilaafka ka dhex taagan, loona baahnayn is-qabqabsi hor leh oo xiligaan bilowda sida wararku ay sheegayaan.
Kulamada oo weli kasocda xarunta madaxtooyada ee magaalada Cadaado ayaan la ogayn waxa kasoo bixi kara, madaxwaynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa horay uga soo horjeestay xilka qaadista baarlamaanka Galmudug, isagoona sheegay dastuurka Galmudug inuu dhigayo inaan mowshin laga keeni karin xukuumadda wax ka yar muddo lix bilood, isaguna xafiiska uu joogo muddo afar bilood ah.
Arrimahan ayaa qayb ka ah saamaynta dowladaha Khaliijka ay ku yeesheen Soomaaliya, waxaana dowlad goboleedyada ay kasoo horjeesteen doorkii dhexdhexaadnimada ee ay qaadatay dowladda dhexe.